I-China Gym Sports Long Sleeve Women T-Shirt PY-CT002 ukwenziwa kunye nefektri | IPinyang
Amadoda S Hoodie & Sweatshirt
Ibhatyi yamadoda S
Abafazi S Hoodie & Sweatshirt
I-Retro Square Collar Short Sleeve Woen T-Shirt PY-DT004
Ukuprinta i-Sexy Sports Short Sleeve Women T-Shirt PY-D ...
I-Gym Sports Long Sleeve Women T-Shirt PY-CT002
Isiko elenzelwe i-Long sleeve yabafazi'S Hoodie PY-WW003
I-100% yeCotton Short Sleeve Men T-Shirt PY-ND004
umthambo ezemidlalo emikhonweni elide abafazi
Ungayikhetha njani ihempe yezemidlalo?
1. Mde kwaye ubhityile
I-T-shirt yemidlalo ye-V-neck iya kuvumela umzimba wonke ukuba ungene ngakumbi komoya, iziphene zincinci zibe luncedo, zicace gca. Ngoku bonke ubuhle obucekeceke obuthandwayo, obu buhle buvumela wonke umntu ukuba abubone, musa ukukhetha uhlobo olukhululekileyo lweT-shirt, oku kuya kubonakala ngathi kubhityile.
I-T-shirt eneT-shirt esondeleyo efanelekileyo kunye nentamo ejikelezileyo iyona ifanelekileyo kulolu hlobo lomzimba. Le ntamo ingqukuva iya kubonakala inciphile, kwaye "ukuphakama" ngokubanzi kuye kolulwa kakhulu. Musa ukucinga ukuba umncinci, kuya kufuneka unxibe ngokuqinileyo, nto leyo eya kubuya umva. Eyona ndlela yokunxiba kukulingana.
3. Utyebe kakhulu
I-T-shirt elula kunye nezemidlalo evulekileyo ngaphandle kwebhanti ifanelekile kwimilo yomzimba wabantu abatyebileyo. Kubaluleke ngokukodwa ukujonga iinkcukacha ze-neckline xa ukhetha ukulungelelaniswa kweT-shirt yezemidlalo. Ukukhetha i-neckline enkulu kunokwenza intamo ibe lula. I-T-shirt encinci ye-V-neck ayifanelekanga, kwaye i-V-neck enkulu ibhetele. V ukuqonda kwenza abantu abatyebileyo bajonge ukudumba.
Ngokubanzi khetha isitayile segxalaba, esilula kunye nesisa, esinemfashini kunye nesinokusebenziseka, esifanele abantu balo naliphi na inani.
Ukusetyenziswa kwemveliso: iihempe zentengiso, iimpahla zeqela, ulwenziwo lomntu, njl., Unokwenza umbala, iphethini, ilogo.
1.Q: Yeyiphi indlela yokuthumela?
A: Ngokucacisa ngendlela.njenge fedex, dhl, tnt njalo njalo; ngomoya, ngolwandle. Iindleko zokuhambisa ngenqanawa kugqitywa ngeendlela zokuhambisa kunye nemveliso uqobo lobunzima kunye nevolumu kunye nedilesi eneenkcukacha.
2.Q: Yeyiphi indlela yokuhlawula?
A: Siyayixhasa indlela eyahlukeneyo yokuhlawula (i-T / T, ikhadi leVisa, umanyano lwaseNtshona, iMoneygram, ukuHlawula okuKhuselekileyo, njalo njalo) T / T
3.Q: Ngaba singaprinta uphawu lwethu okanye ilogo kwiimveliso zakho?
A: Ewe, kuyonwabisa ukuba ube ngumenzi wakho we-OEM e-China ukuhlangabezana neemfuno zakho ze-OEM.
4.Q: Kutheni ezinye iimpahla zinomahluko phakathi komfanekiso wewebhusayithi kunye nezinto ezibonakalayo?
A: Ngenxa yokuba umahluko wokukhanya kunye nesikhangeli, kunye neebhetshi ezahlukeneyo, izinto zinokuba nomehluko omncinci.njengokulungelelanisa, ke iimveliso eziqwalaselweyo mazibe zezobubi ngandlela ithile, ngamanye amaxesha, umfanekiso ngowereferensi kuphela. Ezi zivunyelwe kwimeko leyo. umbuzo, nceda usixelele ngaphambi komyalelo kwaye ubuze ngokucacileyo.
5.Q: Ukubuyisa umgaqo-nkqubo kunye nembuyekezo
1.We samkele kuphela ukugcinwa nokubuyiselwa kwemali kumgangatho osemgangathweni, njengokucheba, imingxunya, kungabandakanyi nawuphi na umonakalo owenziwe ngumntu emva kokuwusebenzisa.
I-2.Pls sinxibelelane nathi ngemifanekiso kwiintsuku ezi-3 emva kokuba ufumene iodolo ukuba kukho nawuphi na umonakalo.
I-3Pls iyangqina ukuba iitemes ezigcinayo zikunye nokupakisha kwasekuqaleni, iilebheli / ii-hangtags, akukho kuhlamba kwaye akukho mdaka.
Ukubuyiselwa kwemali kwenziwa ukuba kuphela endaweni yezinye azifumaneki. Kodwa kwiindleko zokuhambisa ngenqanawa iimpahla ezibuyisiweyo, abathengi baya kuba noxanduva kuyo.
5. Siza kujongana neengxaki zakho kwithuba leentsuku ezi-3 emva kokuba usithumele umyalezo
Egqithileyo Iifashoni zeDiagonal Stripes ezinde zemikhono yabafazi iT-Shirt PY-CT004
Okulandelayo: I-Plain-Sleeve yabafazi i-T-Shirt ye-PY-CT001
Imizila yeDiagonal Stripes eNde enemikhono emide yabafazi T-Sh ...
I-89 iQessen Road, iPaki yezoShishino etyalomali lwangaphandle, kwiSithili seXinjian, kwisiXeko saseNanchang, kwiPhondo laseJiangxi, China